Sida loo Isticmaalo Hashtags si loo kordhiyo Gaaritaanka Ololahaaga | Martech Zone
Sida loo Isticmaalo Hashtags si loo kordhiyo Gaaritaanka Ololahaaga
Arbacada, Agoosto 31, 2016 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Jesse Quist
39% ganacsiyada ha la socon ololahooda bulsheed waxayna u horseedaysaa fursado la seegay. Waxaan ku tusi doonaa sida si hufan loola socdo hashtags inta lagu jiro dhacdooyinka, iyo habab aad u isticmaali karto si aad u dhisto olole ballaadhan. Waxaan diiradda saari doonaa laba waxyaalood:
Kuwa muhiimka ah jaangooyooyinka waa inaad u diyaar garowdaa inaad cabirto markaad ololeynayso hashtag
Simple tricks waxaad u isticmaali kartaa si aad u abuurto meel ballaaran oo la gaaro
Qiyaasaha Ololaha Bulshada ee Muhiimka ah
Inta badan ololayaasha bulshada waxaa loogu talagalay inay dhisaan wacyigelin halkii ay ka wadi lahaayeen isbeddelada degdegga ah. Iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waa inaad si cad u qeexdid hadafka ololahaaga iyo cabbiraadaha aad u baahan tahay inaad la socoto si aad u xukuntid guusha.
Isticmaalka Keyhole's raad raacayaasha koontada, waad awoodi doontaa inaad la soco aasaaska cabirradan kahor iyo kadib markaad maamusho ololahaaga hashtag.
Kordhinta raacayaasha iyo celceliska heerka kaqeybgalka kaa caawinaya inaad cabirto saameynta waarta ee ololahaaga hashtag uu ku leeyahay xubnaha bulshada ee hadda jira iyo kuwa dhawaan la kasbaday.
Waa maxay sababta Kobaca Raacayadu u yahay metrik Muhiim u ah Ololaha Bulshada?
Kordhinta raacayaashu waxay calaamad u tahay gaadhitaanka ololaha aad dooratay inaad maamusho. Waxay muujineysaa in ololahaagu uu awood u yeeshay inuu gaaro adeegsadayaasha aan horay ugu xirnayn astaantaada.
Si aad si sax ah u cabirto saameynta ololahaaga, qor qiyaasta celceliska koritaanka toddobaadyada ka horreeya dhacdada. Kadib, qor celceliska kobaca maalinlaha ka dib dhacdada.
[box box = ”success” align = ”aligncenter” class = ”” width = ”80%”] Dhacdo si habsami leh kor loogu qaaday waa inay muujisaa heerka kor u kaca ee raacitaanka ee kor u kacaya muddooyinkan. [/ box]
Dhanka kale, heerka kaqeybgalka ayaa cabiraya waxtarka fariintaada. Haddii fariinta adiga iyo taageerayaashaada ay riixayaan ay qasab tahay, waa inaad ku aragtaa koror ku dhow celceliska kaqeybgalka kaqeybgalka koontadaada.
Qiyaastaani sidoo kale waa tilmaan muujinaysa inaad dhistay bartilmaameed soo socda adoo maraya ololaha hashtag.
Sideed ula socotaa kobaca raacsan?
Waxaad gacanta kula socon kartaa cabirrada adiga oo xafidaya xaashida macluumaadka ee aad cusbooneysiiso toddobaad kasta. Waxaad u baahan tahay inaad gasho isbeddelada raacayaasha, oo lagu daro heerka ka-qaybgalka toddobaadlaha ah ka hor dhacdada. Tan iyo markii waxaad kaliya la socon kartaa hal koonto kasta oo ka mid ah bogga Twitter-ka ee laga dhex dhisay Analytics dashboard, habkani waqti buu qaadan karaa.
Waxay sidoo kale kaa tagi doontaa mugdiga haddii aad leedahay danjirayaal magac leh oo kaa caawinaya inaad kor u qaaddo ololaha - waa inaad dhex martaa mid kasta oo ka mid ah quudintooda Twitter si ay u soo ururiyaan jaangooyooyinka hawlgelinta markay farriintaada dirayaan.
[sanduuqa nooca = ”info” align = ”aligncenter” class = ”” width = ”80%”] Waad otomatayn kartaa hawsha adoo adeegsanaya a falanqaynta warbaahinta bulshada qalab sida Keyhole[/ sanduuqa]
Keyhole, waxaad kala socon kartaa koontooyin badan hal meel. Barxadda ayaa la socota koritaanka raacsan ololahaaga kahor iyo kadib, iyadoo lala socdo waxtarka danjirayaashaada.
Waa muhiim inaad la socoto mitirka koontadaada ka hor ololaha iyo olole dhajinta si aad u barato waxa shaqeeyay, waxa aan shaqeyn iyo inaad hesho farriinta la jaanqaadaysa dhagaystayaashaaga cusub ee la helay.
Waa maxay cabirrada ay tahay inaad si toos ah ula socoto si loo qiyaaso saameynta ololahaaga hashtag?
Cabbiraadda waxtarka ololaha hashtag wuxuu noqon doonaa mid aan macquul aheyn la'aan qalabka warbaahinta bulshada sida Keyhole. Twitterka hooyo Analytics barnaamijku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la socoto waxyaabaha is-soo-saarka ah laakiin kuuma siineyso inaad gasho sida haashtagyada ama ereyga muhiimka ah ee aad u ololeyneyso ugu faafinayaan barta oo dhan.
Qiyaasta in isha lagu hayo inta lagu jiro ololahaaga:
gaaraan - tirada dadka gaarka ah ee arki kara qoraaladaada.
Dareenka - wadarta guud ee aragtiyaha suurtagalka ah (oo ay ku jiraan isla isticmaaleyaasha oo isla fiirinaya isla boostada dhowr jeer)
Saameyn - wuxuu cabiraa wadarta Aragtida uu isticmaale soo saaray, oo ay ku jiraan dareenka ay soo saaraan Retweeters-kooda
Heerka kaqeybgalka saamaynta - wuxuu cabiraa kaqeybgalka laga sameeyay qoraalada ay abuureen dadka ku howlan istagagaaga ama eraygaaga muhiimka ah. Kani waa qiyaasta kuu oggolaanaysa inaad hagaajiso ololahaaga oo aad kordhiso soo-gaadhistaada sumcadda, adoo gaadhaya saamileyaal leh heerka ka-qaybgalka sarreeya, waxaad awoodi doontaa inaad ku gaadho dhagaystayaal ballaadhan suuqaaga bartilmaameedka ah.
Waa kuwan horudhaca ah Falanqaynta Gaaritaanka iyo Dareenka Keyhole:
[sanduuqa nooca = ”digniinta” align = ”” class = ”aligncenter” width = ”80%”] Maaddaama Twitter-ku uusan siinin qiyaasta koontada saxda ah qalabka saddexaad, gaadhista iyo Dareenka la xisaabiyaa waxay ku saleysan tahay tirada jadwalka ay tiirarka ayaa la muujiyay. Lambarkan waxaa lagu magacaabaa ka-soo-baxyo suurtagal ah. Dareenka dhabta ahi wuxuu noqon karaa meel kasta oo ka yimaada 3% - 13% ka mid ah aragtiyaha suurtagalka ah iyadoo kuxiran arrimo sida waqtiga boostada, erayga muhiimka ah, iyo dhaqdhaqaaqa raacayaasha. [/ Box]
Tabaha fudud ee lagu abuuri karo Gaaritaanka Ololaha ballaaran
Kahor intaadan bilaabin ololahaaga, adeegso hashtag iyo keyword tracker si aad ula socoto mowduucyada warshadaha ballaaran ee la xiriira dhacdadaada. Dhowr maalmood ka dib waa inaad bilowdaa inaad aragto xisaabaadka hela waxqabadka ugu badan ee warshadahaaga.
La xiriir dadkaan kuna martiqaad inay kaqeybqaataan ololahaaga markuu bilaabmayo.
Adeegso koontada qalab si loola socdo koontadaada iyo tan tartamayaasha. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho waxyaabahaaga ugu wanaagsan ee waxqabadka iyo waqtiyada dhajinta. Ku hagaaji farriintaada ku saabsan waxyaabaha ku jira iyo weedha oo sida ugu fiican ula shaqeysa dhagaystayaashaada. Ku dar hashtags kuwaas oo si fiican u qabtay taariikhda ololahaaga gudahood.
[sanduuqa nooca = ”info” align = ”aligncenter” class = ”” width = ”80%”]Talo Pro: markaad qoraneyso saamileyaal, raadi dadka hela 10 ama in ka badan hawlgal kasta boostada ku habboon. [/ box]
Shaacinta: Waxaan leenahay hawlgal gudbin ah Keyhole.
Tags: hawlgelintagaadhistawaxqabadka raacsanhashtagfalanqaynta hashtagololaha hashtagsoo-gaadhista hashtagdareen hashtaghashtag gaaraanDareenkaheerka ka-qaybgalka saamayntafuraha furahagaaraanolole bulshohawlgelinta bulshadasoo socda bulshadahawlgelinta warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada soo socotabaraha bulshada gaaraangaarsiinta bulshadaTwitter
Jesse waa KeyholeKobcinta iyo horseedka suuqgeynta. Wuxuu dhisaa magaca Keyhole isagoo abuuraya xiriiro adag ganacsatada kale ee bulshada wuxuuna jecel yahay ka hadalka suuqgeynta.
SMS: Sida Loo Wanaajiyo loona Kobciyo Farriinta Qoraalkaaga Qormada
Liiska Hubinta Suuqgeynta Dhammeystiran